Iindaba -Imigaqo-nkqubo yokukhetha izixhobo zokupakisha kunye nezinto zokupakisha eziqhelekileyo
Yima Up Pouchches
Ezantsi Gusseted Pouches
Side Gusseted Pouches
Pouching Side ezintathu
Imigaqo-nkqubo yokukhetha izinto zokupakisha kunye nezinto zokupakisha eziqhelekileyo
Izinto zokupakisha zibhekisa kwizixhobo ezisetyenziselwa ukwenza izikhongozeli ezahlukeneyo zokupakisha kwaye ziyahlangabezana neemfuno zokupakishwa kwemveliso, esisiseko sokwenza izinto zokupakisha. Yenye yeemeko ezibalulekileyo zoyilo lokupakisha ukuqonda kunye nokuqonda iintlobo, iipropathi kunye nokusetyenziswa kwezinto zokupakisha kunye nokukhetha izinto zokupakisha ngokufanelekileyo.
Imigaqo yokukhethwa kwezinto zokupakisha
Ukukhethwa kwezinto kubaluleke kakhulu kuyilo lokupakisha. Ukuba imathiriyeli ayifanelekanga, iya kuzisa ilahleko engeyomfuneko kwishishini. Ukukhethwa kwezinto zokupakisha kufanele kugqitywe ngokweempawu zeemveliso ngokwazo, kunye nemigaqo esisiseko kukhuseleko lwezenzululwazi, ezoqoqosho kunye nokusingqongileyo.
1.Isekelwe kwimfuno yemveliso
Ukukhethwa kwezinto azithethi. Okokuqala, imathiriyeli kufuneka ikhethwe ngokweempawu zorhwebo, ezinje ngohlobo lwempahla yorhwebo (eqinileyo, engamanzi, njl. Njl.), Nokuba yonakalise kwaye iguquguqukayo, nokuba ifuna ukugcinwa kude nokukhanya . Okwesibini, kufuneka siqwalasele inqanaba lempahla. Izinto zokupakisha zorhwebo oluphezulu okanye izixhobo ezichanekileyo kufuneka zinike ingqalelo enkulu kwinkangeleko yazo yobuhle kunye nokusebenza ngokugqwesileyo; Izinto zokupakishwa kwezinto zodidi oluphakathi kufuneka zinike ingqalelo ngokulinganayo kubuhle kunye nokusebenza; Ngelixa izinto zokupakisha zorhwebo ezikudidi oluphantsi kufuneka zinike ingqalelo ephambili ekusebenzeni.
Izinto zokupakisha kufuneka zikhusele imveliso yorhwebo, ke kufanele ukuba ibe namandla, ubulukhuni kunye nokomelela, ukuziqhelanisa nefuthe loxinzelelo, ifuthe, ukungcangcazela kunye nezinye izinto zangaphandle.
3. Uqoqosho kunye nokusingqongileyo
Izinto zokupakisha kufuneka zikhethwe kangangoko kunokwenzeka kuluhlu olubanzi lwemithombo, elula, enexabiso eliphantsi, enokuphinda isebenze, ehlaziyekayo, yokulungisa izinto ezingangcolisiyo, ukuze zingabangeli iingozi kuluntu.
Izinto zokupakisha eziqhelekileyo kunye neempawu zabo zokusebenza
Kukho iintlobo ngeentlobo zezinto zokupakisha. Ezona zisetyenziswa ngoku okwangoku liphepha, iplastikhi, isinyithi, iglasi, iiseramikhi, izinto zendalo, izinto zeemveliso zefayibha, izinto ezidityanisiweyo kunye nezinto zokhuselo lokusingqongileyo ezinokutsha
1.Iphepha lezinto zokupakisha
Kuyo yonke inkqubo yokupakisha uyilo, izinto zokupakisha iphepha, njengezinto eziqhelekileyo zokupakisha, zisetyenziswe ngokubanzi kwimveliso nakwindlela yokuphila, ukusuka kwiimveliso zeshishini, ukupakishwa kombane, iibhegi, iibhokisi zezipho, ukusuka kwiphepha lokupakisha ngokubanzi ukuya kwiphepha lokupakisha , Zonke zibonisa umtsalane wemathiriyeli yokupakisha iphepha.
Ukulungiswa kwezinto zephepha kufanelekile, iindleko eziphantsi, ezifanelekileyo kwimveliso yoomatshini kunye nokushicilela okuhle, kwaye inezibonelelo zokurisayikilisha, ezoqoqosho kunye nokhuselo lokusingqongileyo.
Izinto 2.plastic ukuphakheja
Iplastiki luhlobo lwezixhobo zepolymer zokwenziwa. Kulula ukuveliswa, kwaye ineempawu ezintle zokumelana namanzi, ukumelana nokufuma, ukumelana neoyile kunye nokugquma. Ngempahla eninzi ekrwada, ixabiso eliphantsi kunye nokusebenza okugqwesileyo, iye yaba yeyona nto ikhawulezayo yokupakisha izinto emhlabeni kule minyaka ingama-40 idlulileyo kwaye yenye yezona zinto zibalulekileyo ekupakisheni kwimpahla yokupakisha yale mihla.
Izinto zokupakisha zeMetal
Njengenye yezinto zokupakisha zemveli, isinyithi sisetyenziswa ngokubanzi ekupakisheni imveliso, ukupakisha kunye nokuthengisa, kwaye kudlala indima ebalulekileyo kwimpahla yokupakisha.
4.Glass, izinto zokubopha yodongwe
Izinto ezisisiseko zeglasi sisanti ye-quartz, isoda ebusayo kunye nelitye lekalika. Inempawu zokucaca okuphezulu, ukunganyamezeleki kunye nokumelana nokubola, ukungabinetyhefu kunye nokungabi nasongo, ukusebenza kweekhemikhali okuzinzileyo kunye neendleko zemveliso ephantsi kwaye zingenziwa kwizikhongozeli ezicacileyo nezidlulayo zeemilo ezahlukeneyo kunye nemibala.
Iglasi isetyenziswa ngokubanzi ekupakisheni ioyile, iwayini, ukutya, isiselo, ijam, izinto zokuthambisa, izinto zokuthambisa kunye neemveliso zamayeza.
Iiceramics zinokuzinza okuhle kwemichiza kunye nokuzinza kwe-thermal, kwaye ziyakwazi ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nokudleka kweziyobisi zamachiza ezahlukeneyo. Utshintsho olukhawulezileyo kubushushu nakwingqele alunampembelelo kwiiceramics, akukho deformation kunye nokonakala kweminyaka. Yinto efanelekileyo yokupakisha yokutya kunye neekhemikhali. Ukupakisha okuninzi kwe-ceramic ngokwayo kungumsebenzi wezandla ococekileyo, kwaye inexabiso lesicelo elikhethekileyo kwicandelo lokupakisha kwendabuko.
5.Izinto zokupakisha zendalo
Izinto zokupakisha zendalo zibhekisa kulusu lwezilwanyana, iinwele okanye amagqabi ezityalo, iziqu, iintonga, imicu, njl.nokusetyenziswa njengempahla yokupakisha ngokuthe ngqo okanye ngokulula kwenziwe iipleyiti okanye amashiti.
Izinto ze-6.Fiber zokupakisha
Amalaphu efayibha athambile, kulula ukuwaprinta kunye nedayi, kwaye anokuphinda asetyenziswe kwaye asebenze kwakhona. Kodwa iindleko zayo ziphezulu, ukuqina kusezantsi, ngokubanzi kusebenza ekupakisheni kwangaphakathi kwemveliso, njengokugcwalisa, ukuhombisa, ukothuka kunye neminye imisebenzi. Izinto zokupakisha zefayibha kwimarike zinokwahlulwa ikakhulu kwifayibha yendalo, ifayibha eyenziwe ngumntu kunye nefayibha eyenziweyo.
7.Izixhobo zokupakisha ezidityanisiweyo
Izinto ezidibeneyo zenziwe ngeentlobo ezimbini okanye nangaphezulu zezixhobo ngendlela ethile kunye neendlela zobuchwephesha ukuze zibe neempawu zezinto ezahlukeneyo ukwenza ukusilela kwento enye, ukwenza into ebambekayo yokupakisha enomgangatho obanzi. Xa kuthelekiswa nezinto zemveli, izinto ezidityanisiweyo zinezibonelelo zokonga izixhobo, ukurisayikilisha okulula, ukunciphisa iindleko zemveliso kunye nokunciphisa ubunzima bokupakisha, ngenxa yoko ixabisa ngakumbi kwaye ikhuthazwa.
8.Izinto zokupakisha ezinokuthomalalisa indalo
Izinto ezintsha ezinobuhlobo bokusingqongileyo zizinto ezidityanisiweyo ezenzelwe ukunciphisa ungcoliseko olumhlophe, olwenziwa ngokubanzi ngokuxuba imithi okanye ezinye izityalo. Iyaboliswa yintsholongwane kwaye akukho lula ukuyenza ungcoliseko, kwaye lolona lwalathiso luphambili lwezinto zokupakisha kwixa elizayo.
Ixesha lokuposa: Mar-05-2021
Linyi Guoshengli Packaging Izinto Co., Ltd.
Ifowuni: + 86-539-8597897